Nimanka Madaarka Hargeysa ee lacagta kaashka ah loo hayey 600-MITIR ku dari waayey miyaa waddo 370km ah dhisaaya? | Salaan Media
Nimanka Madaarka Hargeysa ee lacagta kaashka ah loo hayey 600-MITIR ku dari waayey miyaa waddo 370km ah dhisaaya?
Ugu horeyn waxaan salaamayaa saxaafada madaxabanaan iyo qorayaasha sharafta, mudan, akhristayaasha sharafta leh waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka “ASCWW”
Salaam ka dib waxaan doonaayaa in aan ummada gaadhsiiyo fariin, aan isleeyahey waad ku saxsantahey , fariintaasi waxaa weeyey digniin dadka aan uga digaayo kooxa xaaraan quutayaalka ah ee dadka u sheegta dowladnimada iyo mansabyada lagu shaqeysto ee sida wasiir, IWM.
Hadaba waxaa beryahan danbe aynu maqleynaa waxaa lacag loo gurayaa wadada ceeri gaabo iyo burco, ma xuma oo dadkaasi waa dad walaalaheen ah ooy dhibaato badan ka heysato xaga waddo xumida, inkasta oo dhulkeenu uu waddo u wada baahanyahey ilaa 90/100 , ayaa hadana la sii kala baahi badanyahey waan runtii jeclaan lahaa in waddaasi la dhiso.
Balse su’aasha meesha taalaa waxaa weeyey yaa waddada dhisaaya ma wasiir xirsi iyo wasiir usaama, iyo wasiir samaale janoka bood?
Waxeynu la soconaa in shaley iyo maanta xitaa wasiir xirsi uu caruurtii yaryareyd ee iskuulada hoose ee teanageka aheyd uu lacag ka ururinaayo waa wax laga xumaado in wasiir xirsi dadku ay talaabo ka qaadi waayaan oo uu xitaa iskuuladii lacag ka urursaaanyo oo uu qaab foolxun u dawarsanaayo!
Aan u suu noqdo kooxda wasiirada ah ee siilaanyo qaarna qabiilka ku shaqaaleysiiyey qaarna adeegaaylkiisa u yahiin, waxaynu ogeyn in madaarka hargeysa loogu deeqey lacag dhan 10-malyan oo dollar, waxeynu ognahay in ilaa maanta la laayahey lacagtaasi meel ay jaan iyo cidhib dhigtay si cad oon gabasho laheyna loo xaday iyadoo la is garabsanaayo, madaxweyne, siilaanyo iyo kooxda wasiiro ku sheega ah ee uu u horeeyo wasiirka duulista iyo hawada mr usaama.
Waxeynu ognahey in si cad loo diidey in dadweynaha laga qanciyo meesha ay lacagtaasi martey iyo cidii ka muuslka aheydba, sababtoo ah waxaa, meesha ka jirta koox soo shaqo tagtay oo boobka hantida ummada u heshiisey waliba qaab qabiilnimo,
Hadaba miyaa maanta dadka noocaasi ah ee sidaasi u dhaqmaaya aan ka dhageysanaa waxaanu dhiseynaa waddo ilaa 370 km ah? waxaan leeyahey ninkii run mooodow adigaa doqon ah.
Ugu danbeyn ummada reer somaliland, waxaan leeyahey ogaada hadeydaan duliga iska diidin ooydaan xaqa u hiilin aakhirka waxaad ku dhici doontaan dab munaafuq dhidey muumin ayaa ku gubta ee munaafguqiinta hadalkooda iska diida.